October | 2015 | AMAPHUPHO
By info on October 22, 2015 in amaphupho nezincazelo, ngezinto zokwakha
Uma uphupha ukuthi ubone izinto zokwakha njengosimende nezitini, kuyibhadi. Kuzoba nokulwa empilweni yakho maduzane nje, noma uzodumala mayelana nezinto ozitholile empilweni. Uma uphupha izinto zamapulangwe njengezinduku, noma amapulangwe, kusho ukuthi kuzoba nezinkinga empilweni yakho maduzane nje uma ungathathi ikhefu.
By info on October 19, 2015 in amaphupho nezincazelo, ngejele
Uma uphupha ukuthi usejele, kuyinto enhle. Kusho ukuthi uzoba nenhlanhla emsebenzini, ube nodumo futhi uphemelele entweni oyenzayo. Uma weqa ejele kuhle kakhulu, futhi kusho ukuthi uzonqiba izinkinga zakho. Uma ungujele, kusho ukuthi abangani bakho bazophuma enkingeni maduzane.
By info on October 15, 2015 in amaphupho nezincazelo, ngamakhaya
Uma uphupha ukuthi usekahya lakho, kusho izinto ezingafani kuya ngokuthi ungubani. Uma usemusha, kusho ukuthi impilo yakho izoba mnandi. Uma unophathina, kusho ukuthi bazothembeka futhi nizojabula ndawonye. Uzoba nezingane ezinamandla ezinempilo noma kunjani. Uma indlu ibukeka ithuthukile, uzoba nezimali kodwa uma inganakekeliwe, uzohlupheka ngokwezimali, ikakhulukazi uma abantu bakhona bengakuphathi kahle. Uma uzakhela umuzi, kusho ukuthi […]
By info on October 12, 2015 in amaphupho nezincazelo, ngezingane ezincane
Uma uphupha ukuthi ubona ingane encane, futhi usemsulwa, kungenzeka uheheke ukulala nomuntu ongafanele. Uma ubona ingane encane ephusheni lakho ilele ngamadolo, uzoba nesivakashi maduzane. Uma ingane izichamela noma izikakela uyibambile, kuyinhlanhla uma wena ungangcoli kodwa kuyibhadi uma ikungcolisa.
By info on October 10, 2015 in amaphupho nezincazelo, ngokudla
Uma uphupha ukuthi udla ukudla okumnandi, uzothola injabulo nempumelelo empilweni. Uma udla ulele phansi, kusho ukuthi kukhona okuzokulahlekela. Uma ungowesifazane ongashadile, kusho ukuthi kuzoba nezinkinga nelobolo lakho. Uma udla ekamelweni lokudla, kusho ukuthi uzokwenza umngani omusha maduzane.
Uma uphupha ubona inja, kuwuphawu oluhle ima iziphethe kahle futhi ikulalela, ikakhulukazi uma kuwumdlwane. Uma inja ingaziphethe kahle, ilwa noma iphula izinto, kusho ukuthi uzoba nenkinga empilweni yakho kungekudala, ikakhulukazi ivela kubantu abangathembekile. Uma inja ikuluma, kukhona okuzingelayo okungenzeka ukukhafulele ngisho nangomoya omubi. Uma ikhonkotha noma iklewula, kusho izikhathi zezinkinga emndenini wakho. Uma uphupha umakoti […]
By info on October 4, 2015 in amaphupho nezincazelo, ngesonto
Uma uphupha ukuthi usesontweni, ngemvamisa kuwuphawu oluhle kuwe futhi uzothuthuka. Uma uzila ephusheni lakho, kusho ukuthi wena noma umuntu omthandayo uzoshada maduzane, ikakhulukazi uma uzwa insimbi yasesontweni ngaphezu kwalokho. Kodwa uma isonto livaliwe uma usufika khona, kusho ibhadi. Uma ubona umbiko womshado esontweni, kusho ukuthi labo bantu bazodivosa.